"Fa raha tonga ny Fanahin’ny fahamarinana, dia Izy no hitari-dàlana anareo ho amin’ny marina rehetra; fa tsy hiteny ho Azy Izy, fa izay ho reny dia holazainy avokoa; ary ny zavatra ho avy aza dia hambarany aminareo." Jao. 16 : 13.
Ahoana no ahafahantsika mijoro amin'ny fotoanan'ny fitsapana raha toa ka tsy azontsika ny tian'ny tenin'i Kristy hambara? Hoy lzy: "Izany teny izany dia efa voalazako taminareo raha mbola mitoetra eto aminareo Aho; fa ny Mpananatra, dia ny Fanahy Masina, Izay hirahin'ny Ray amin'ny anarako. Izy no hampianatra anareo ny zavatra rehetra sy hampahatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo" Jao. 14:25,26. Ny Fanahy Masina no hampahatsiaro antsika ny tenin'i Kristy. Mikasika ny Asa ataon'ny Fanahy Masina ny votoatin-kevitr' ilay lohahevitra, izay nosafidin'i Kristy hantitranterina tamin'ny resaka farany nifanaovany tamin'ny mpianany. Velaram-pahamarinana midadasika no nosokafany, teo anoloan'izy iteo. Natao handray ny Teniny amin'ny alalan'ny finoana izy ireo, ary ny Fanahy Masina, Ilay Mpampahery, dia natao hampahatsiaro azy ireo ny zavatra rehetra.
Ny fampaherezana omen'i Kristy ato amin'ity teny fikasana ity dia hita eo amin'ilay filazana fa ho amin'ny mpanaraka Azy hatramin'ny farany ny hery miasa mangina avy any an-danitra. Kanefa tsy mino ary tsy manaiky izany ny olona amin'izao vanim-potoana izao, ary vokatr'izany dia tsy tian'izy ireo izany, ary tsy hita taratra eo amin'ny fanandramana ataon'ny fiangonana ny fahatanterahany. Lasa tsy raharahain'ny fiangonana loatra ny resaka mikasika ny teny fikasana ny amin'ny fanomezana ny Fanahin'Andriamanitra. Tsy miantefa any amin'ny olona izany, hany ka araka izany ihany koa ny vokatra antenaina fahamainana ara-panahy, fahamaizinana ara-panahy, fitotonganana sy fahafatesana ara-panahy. Zavatra tsy misy dikany sy tsy manandanja no mameno ny saina sy ny fanahy, fa ny hery avy any an-danitra indray no tsy ampy, kanefa io no tena ilaina ho amin'ny fitomboana sy firoboroboan'ny fiangonana, ary hiteraka ireo fitahiana hafa rehetra ny fananana azy, izay efa nomena antsika tamin'ny fahafenoany tsy misy fetra. Rehefa afa-po amin'ny zavatra kely ny fiangonana dia manala ny tenany tsy handray zava-dehibe avy amin'Andriamanitra. Fa nahoana moa isika no tsy noana sy mangetaheta ny fanomezana ny Fanahy Masina, kanefa io no fitaovana ahafahana mitahiry ny fo mba hadio ? Nosoritan'Andriamanitra fa hiara-miasa amin'ny ezaka ataon'ny olombelona ny herin'Andriamanitra.
Tena ilain'ny Kristianina ny mahazo sy mahalala ny dikan'ny teny fikasana ny amin'ny Fanahy Masina mialoha indrindra ny fiavian'i Jesôsy Tompontsika fanindroany. Resaho ny mikasika izany, mivavaha ny amin'izany, torio ny teny mikasika izany. Fa ny Tompo mbola maniry lavitra ny hanome ny Fanahiny Masina mihoatra noho ny ray aman-dreny manome fanomezana tsara ho an'ny zanany. - RH, 15 Nôv. 1892.